Xisaabinta Daruuraha: Codsiyada Ilaha Furan ee Hadda jira iyo Madashooyinka | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | 24/09/2021 06:00 | Noticias, Shabakado / Adeeg
Waqti ka waqti, sida caadiga ah waxaan si qoto dheer u sahamineynaa a Domain IT Xooga saaray dhinaca Software Bilaash ah, Isha Furan iyo GNU / Linux. Markii ugu dambeysay waxay ahayd dhowaan ku saabsan Sirdhaad dabiici ah daabacaad loogu magac daray: "Sirdoonka Artificial: The best known and used use open source AI". Maantana waxaan ku samayn doonaa wax la mid ah beerta IT -ga ee "Computing Cloud", taasi waa, ee Xisaabinta Daruuraha.
Maskaxda ku hay in "Computing Cloud" ama Xisaabinta Daruuraha asal ahaan waa maareynta khayraadka IT -ga ee loo adeegsado internetka. Waa xisaabinta saafiga ah oo loo hirgaliyay adeeg ahaan, waxaana lagu hoos keenay dalabka iyo nidaamka lacag-bixinta, iyada oo loo marayo a Madal adeegyada daruuraha.
Computing Cloud: Wax walba Adeeg ahaan - XaaS
Kuwa danaynaya inay sahamiyaan qaar ka mid ah kuwayaga qoraallo hore oo la xiriira leh baaxadda Xisaabinta Daruuraha, waxaad riixi kartaa xiriiriyeyaasha soo socda, ka dib markaad dhammaysato akhrinta daabacaadan:
"XaaS hadda waa tusaalaha cusub ee suuqa xisaabinta daruuraha oo isbeddelka kobaca ee sannadaha soo socda uu saamayn weyn ku yeelan doono qaybaha Isgaarsiinta, Xog -weynaha iyo Internetka Waxyaabaha (IoT). Maadaama XaaS ay tahay fikrad farsamo oo ka kooban dhowr fikradood oo la xiriira hal -abuurnimada farsamada ee daruuraha, taasoo soo saarta habab cusub oo wax -soo -saar iyo qiime loogu daro ururada, kuwa dadweynaha iyo kuwa gaarka ahba.". XaaS: Xisaabinta Daruuraha - Waxwalba Adeeg ahaan
1 Xisaabinta Daruuraha: Meelaha ugu Sarreeya ee Meel Furan iyo Barnaamijyada
1.1 Platforms Computing Cloud
1.1.2 Macdanta Cloud
1.1.4 Maqal iyo Muuqaal
1.2 Barnaamijyada Xisaabinta Cloud
Xisaabinta Daruuraha: Meelaha ugu Sarreeya ee Meel Furan iyo Barnaamijyada
Platforms Computing Cloud
Waxaa ka mid ah Aaladaha "Cloud Computing" o Xisaabinta Daruurahaiyo il furan, waxaan xusi karnaa oo sharxi karnaa 4 -ta soo socota:
Waa Nidaam Hawl -gal oo daruurta ku jira oo koontaroola kooxo badan oo xisaabinta, kaydinta iyo ilaha shabakadda ku jira xarun xog oo dhan, dhammaantoodna waa la maareeyey oo lagu bixiyay API -yada oo leh habab xaqiijin caadi ah. Waxa kale oo ay leedahay guddi kantarool oo u oggolaanaya maamulayaashu inay xakameeyaan oo fududeeyaan bixinta kheyraadka dadka isticmaala iyaga oo adeegsanaya shabakadda webka. Ka sokow shaqeynta caadiga ah ee kaabayaasha adeeg ahaan, waxaa jira qaybo dheeri ah oo bixiya orchestration, maareynta khaladaadka iyo maareynta adeegga, oo ka mid ah adeegyada kale, si loo hubiyo helitaanka sare ee codsiyada isticmaaleyaasha. Waa maxay OpenStack?
Waa Madal furan oo ah Adeeg (PaaS) oo bixisa qaab aad u hufan oo casri ah oo lagu bixiyo codsiyada daruuriga ah ee dusha sare ee Kubernetes. Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa xulasho daruuro, qaab dhismeedyo, iyo adeegyo codsi. Tani waxay kuu fududeyneysaa oo kuu sahlaysaa inaad dhisto, tijaabiso, dejiso oo cabirto codsiyada. Waa maxay Cloud Foundry?
Waa madal weel Kubernetes ah oo leh hawlgal otomaatig ah ilaa dhammaad, taas oo kuu oggolaanaysa inaad maareyso daruuraha isku-dhafan, codadka badan, iyo geedi-socodka xisaabinta gees. Xalkan ka yimid shirkadda Red Hat waxaa loo habeeyay si loo wanaajiyo wax soo saarka soo -saaraha iyo hal -abuurka kobcinta. Iyo hawlgallo otomaatig ah oo dhammaad-ilaa-dhammaad ah, waayo-aragnimo joogto ah oo ku aaddan bay'adaha, iyo u-adeegidda iskaa-wax-u-qabso ee loogu talagalay soo-saareyaasha, kooxuhu waxay u wada shaqeyn karaan sidii ay fikradaha horumarka uga gudbin lahaayeen si wax-ku-ool ah. Waa maxay Red Hat OpenShift?
Waa il furan oo daruur badan leh iyo madal orchestration gees ah. Kaas oo ka mid ah waxyaabo kale, ayaa u oggolaanaya ururrada inay si dadaal la'aan ah ugu gudbaan daruuraha dadweynaha iyo qaab dhismeedka daruuraha iyagoo u oggolaanaya inay si otomaatig ah u dhisaan kaabayaashooda jira oo ay weheliyaan geesaha la qaybiyey iyo ilaha daruuriga ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale u oggolaaneysaa adeegsadayaasha inay maareeyaan aagag kala duwan iyo aagag orchestration oo qayb ka ah dhuumaha CI / CD ee caadiga ah. Waa maxay Cloudify?
Kuwa kale 13 jira oo la yaqaan Waxay yihiin:
OpenShift Asal / OKD
Barnaamijyada Xisaabinta Cloud
Waxaa ka mid ah Aplicaciones la xiriira ama lagu dabaqi karo Domain IT del "Computing Cloud" o Xisaabinta Daruurahaiyo il furan, waxaan xusi karnaa 10 -ka soo socda:
Xusuusnow taas, gudaha qoraallo hore oo la xiriira kor ku xusan, waxaa suurtogal ah in la dhex galo fikradaha iyo farsamooyinka soo socda:
Wax walba Adeeg ahaan: XaaS, Wax kasta Adeeg ahaan, ama Wax walba Adeeg ahaan.
Software ahaan Adeeg ahaan: SaaS, Software -ka Adeeg ahaan.
Madal ahaan Adeeg ahaan: PaaS, Madal ahaan Adeeg ahaan.
Kaabayaasha Adeeg ahaan: IaaS, Kaabayaasha Adeeg ahaan.
Faa'iidooyinka, Faa'iidooyinka, Qasaarooyinka iyo Khatarta: Laga bilaabo Computing Cloud.
La shaqeyn karo: Daruuraha.
Noocyada Daruuraha: Dadweynaha, Gaarka ah, Beesha iyo Beelaha.
Goobaha mustaqbalka baahsan: Xisaabinta daruuraha.
Sirdoonka macmalka ah: Ilaha furan ee ugu caansan uguna isticmaalka badan AI
Marka la soo koobo, baaxadda "Computing Cloud" waa mid ka mid ah kuwa badan isbeddellada IT ee hadda jira in maalin walba uu ku hormaro xoog iyo in uu ballan qaadayo in uu hirgelin doono guulo badan oo muhiim u ah bulshada, gaar ahaan xagga shaqada iyo hab -nololeedka dadka. The Xisaabinta Daruuraha oo ay weheliyaan tiknoolajiyada horumar buuxa leh sida 6G, ka Sirdoonka Artificial (AI), Internetka Waxyaabaha (IoT) iyo kuwo kale oo badan, ballan qaad a mustaqbalka weyn IT ee dadnimada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Xisaabinta Daruuraha: Codsiyada Ilaha Furan ee Hadda jira iyo Meelaha